About Us-raaxo HOTEL qasabada saaraha
Armati-- Shiinaha qasabada saaraha for Hotel Project raaxo.
Armati hardware qubeyska, soo saaraha ugu horeeysa ee fasalka sare brand nadaafada ee Asia-Pacific Gobolka. Waxaan leenahay warshad wax soo saarka hardware qasabada biyaha musqusha magaalada koonfurta Shiinaha Jiangmen (Heshan) .Waxa kale oo acquird a-hawlgalayaasha saarka Jarmal. Hore ka 1966 aan ku lug galay warshadaha design musqusha, laga bilaabo bartamihii 1990s, waxaan bilaabi qasabada biyaha iyo qubeyska warshadaha wax soo saarka ugu habboon, siday u kala horreeyaan ee qaybaha wax soo saarka Foshan iyo Heshan City.Our ka mid raaxo qasabada dhamaadka sare, accessories hardware musqusha hotel, nidaamka Roob hotel, barrar musqusha waalka, qasabada shidma si toos ah, oo dhammeystiran la aadka kartoo dhagax macmal ah wax aan waxba tarayn iyo musqusha bathtube.
Amati musqusha horay wadaag saarka OEM badan Jarmal iyo brand si fiican u yaqaan Talyaaniga, oo ay ku jiraan aad u caan Dornbracht, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti iyo wixii la mid ah, oo mararka qaar aan soo saaro model dhamaystiran, mararka qaar, waxaan siin qaybaha oo tayo sare leh components.With alaabta iyo ka xoogbadan barbar qiimaha resonable, waannu ku guuleystay soo jiidashada shan-star waaweyn Hotel Management Group ee Asia-Pacific gobolka oo ay noqoto Nala hawlgal muddo dheer ah, sida Kempinski, Sheraton, uguurtay The iyo qaar badan oo. (Hubi soo socda ee hotel Armati waxbarasho kiiska mashruuca)
In suuqa qoyska Chinese, waxaan sidoo kale diiradda on mashruuca hotel raaxo market.All of qaybiyaha our gobolka ayaa sidoo kale qaybiyaha rasmiga ah ee GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT .Waxa Kale oo jira alaab-of superstore ugu weyn ee dunida sida Walmart,The Home Depot, Lowe ee, waxaan jeclaan lahaa in arsaaqa noo share suuqa caalamiga ah ee qeybta suuqa hotel raaxo. (Hubi soo socda ee Daraasad dhacdo mashruuca hotel Armati ee gudaha iyo dibadda)
Sida hardware ah saaraha in ka badan 20 sano waayo-aragnimo, waxaan ayaa helay tiro badan oo caaryada for style qasabada biyaha kala duwan iyo shape.Partner la naqshadeeye Talyaani waxaan leenahay 38 qasabada taxane oo taxane 16 accessories qubeyska sida range.But caadiga ah waxaan leenahay 30% ganacsiga qoyska sida midhaha caadada, iyo> 50% ganacsiga caalamiga ah sida OEM saarka kartoo. (Hubi soo socda ee Armati accessories musqusha qasabada buugga soo saarka)
Waxaan soo jeedinay in ay soo saaraan qasabada gaar ah waayo, naqshadeeye kasta oo uu leeyahay, riyooyin iyo rabitaanka! Waxaan dhigay MOQ yar u-soo-saarka OEM, xitaa waxay soosaaraan aan beddeli karaa qasabada si aad u odoroso gaar ah. waxaanmagine in saare heerka tayada la mid ah in HANSGROHE, GROHE ka dhigi kartaa qasabada accroding aad fikrado, sawir, ama sawiro, iyo waqtiga hogaanka maalmood oo kaliya 10 in 4 todobaad. (Tusaale ahaan noo dhawaan ka fikrad design inay ku dhameysato wax soo saarka mass kaliya 45 maalmood) . Tani waxay noqon doontaa mid gaar ah, muujinayo oo fiican side of naqshadeeye tayadiisa, formation iyo riixo gacanta aad brand naqshadeeye. Sida aad u caan Starck Philippe. (halkan hubi Armati Custom qasabada waxbarasho kiiska hotel)
1) Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado taariikhda Amati, Ma waxaad tahay shirkad Chinese ama shirkad caasimada leedahay shisheeye, iyo waa maxay xiriirka ka dhexeeya shirkadda German?
Waxaan kooxda multi-qaran, our equit saldhig saarka la-soo-saarka dalka Taiwan iyo maamulka knowledge.We heleen warshad Germany ah oo waayo-aragnimo sano ee ku ware.We caafi kiraystay naqshadeeye saarka Talyaaniga si ay u abuuraan noo gaar ah model.We labaduba Chinese iyo German.In ah suuqa gudaha Shiinaha iyo suuqa caalamiga ah, waxaan isticmaali Amati sidii qori alaabooyinka nadaafada.
2) Waxaan jeclaan lahaa in ka badan ee salka wax soo saarka, sida goob juquraafi, degaanka, shaqaalaha iyo QC ogaado, iyo sidoo kale size aad ee ganacsiga, iwm?
Waxaan leedahay warshad wax soo saarka dhexdhexaad la 10000 mitir laba jibaaran oo 150 worker.We focus on ugu-dhamaadka sare suuqa mashruuca shan Hotel Stars, la dhaqanka weyn ee macaamiisha market.Our waxaa ka mid ah Hotel iyo naqshadeeye Arrimaha Gudaha, qandaraasle, sameeysa (inta badan soo afjaro user), retail iyo qaybinta ma inoo yahay priority.We fuliyo saarka JIT style.In 2015, our suuqa Chinese isbeddelkaas axumad USD 12 million, waayo dhan isbeddelkaas ganacsi adag in 35 million USD.
3) Sida loo astaysto qasabada biyaha? Anna waxaan leeyahay mid kaliya mashruuca on gacanta, waxaan codsan kartaa in Customize qasabada?
Waxaan leenahay 50% ee alaabta la dhoofiyo ee macmiilka qasabada astaysto, halkan baaro si faahfaahsan.
4) Your qasabada yihiin-dhamaadka sare, shan-star hotel fasalka, waxaan jeclaan lahaa in la ogaado si faahfaahsan, aad u soo bandhigo karaa?
Waxaan u isticmaali naxaas ugu fiican oo tayo leh si ay u sameeyaan qasabada biyaha iyo dahaadhay iyo daaweynta dusha technology isla heerka Jarmal, Waxaan leenahay channel dejinta gaar ah qayb ka tayo leh sida Kereox kaydadka dhoobada iyo aerator NEOPERL. (halkan baaro Armati si faahfaahsan wax soo saarka qasabada)
5) aad ku siin karaan hotel Suite musqusha, xirmo guud?
Dhab ahaantii, waxaan soo saari hardware musqusha naxaasta sida qasabada biyaha, accessories musqusha, taxane qubeyska, iyo qashinka xamaamka, waxaan sidoo kale waxay leeyihiin wax aan waxba tarayn dhagax macmal ah iyo xamaamka garab leh. We ogaan musqusha kasta hotel waa mid gaar ah, raac hotel ee gaarka ah deegaanka, cabbir aad ku qorshayso kasta fitting.Sometimes musqusha, iibsashada brand si fiican u yaqaan ee musqusha habboon, waxaa laga yaabaa in aan ku haboon ee degaankaaga faahfaahinta goobaha nadaafada. Waxa fiican in la helo waayo-aragnimo, damaanad tayada saaraha ah kartoo in ay iskaashi la, ilaalinta saamayn farshaxanka iyo dhaqaalaha, Haddii qof uun isticmaalaya lagu daydo brand jira, waxaa jira uma baahna naqshadeeye a.
6) meeh Gun-soo-saarka, waxaan booqan kartaa dhirta ee Shiinaha?
saldhigga Our wax soo saarka magaalada koonfurta Shiinaha Jiangmen (Heshan), Guangdong province.We taagay xafiiska ee Shenzhen suuqa gudaha, waxaan leenahay macradka magaalada downtown.W-dhawoow si booqo dhirta si aad uga hadasho looga baahan yahay mashruuca. Mararka qaarkood maalmood 1 ama 2 fool shir xaqiiqda xal u heli karo dhibaatada ka sii badan intii dhowr isgaarsiinta bishii email.
(halkan hubi warshad wax soo saarka Armati oo si faahfaahsan wax soo saarka)